Ciidamada AMISOM oo ka guuray xaruntii ugu weynayd ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ciidamada AMISOM oo ka guuray xaruntii ugu weynayd ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho
Ciidamada AMISOM, gaar ahaan kuwa ka socdo dalka Burundi ayaa gebi ahaan maanta isaga guuray xarunta Jaamacadda Gaheyr oo ku taallo degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ahayd xarunta ugu weyn ay ku leeyihiin magaalada.
Ciidamadaasi oo halkaasi deganaa muddo 10 sano ka badan ayaa saakay gebi ahaan isaga guuray, iyadoona todobaadyadii lasoo dhaafay ay sidaan oo kale halkaas uga guureen tiro ciidamo kale oo AMISOM ka tirsan.
Kahor inta aysan ciidankaasi maanta ka guurin Jaamacadda Gaheyr waxaa halkaasi lagu qabtay xaflad sagootin ah oo ciidankaasi loo sameeyay, waxaana xafladaasi ka qeyb galay madax ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya.
Dhinaca kale, warar hoose oo ay warbaahinta Bulshoweyn helayso ayaa sheegaya in ciidankaasi ay u ruqaansadeen dhinaca magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe, halkaas oo ah ay ku sugan yihiin ciidamo kale oo ka tirsan AMISOM.
Qorshahaan ayaa ahaa mid ay dowladda federaalka Soomaaliya in muddo ah ku dadaalaysay sidii ay ciidamadaasi AMISOM uga guuri lahaayeen xaruntii hore ee Jaamacada Gaheyr, si xaruntaasi dayactir loogu sameeyo.